သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: 2006
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်(၈) မှာ ပါလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မတောက်တခေါက်
ငါးလေးတွေလို အိမ်ပြန်ချင်ကြတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 10:22 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ သံယံဇာတတစ်ခုခုထွက်တယ်ဆိုရင် တစ်စုံတစ်ရာကိုကြောက်ဖို့ သင့်တယ်လို့ 
Dr. Joy Brown - American Radio Psychologist ကဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံလေးတစ်နိုင်ငံဟာ ရေနံ၊ ဆင်စွယ်၊ ကျွန်း၊ ဓာတ်သတ္တုတစ်ခုခုထွက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်
တစ်စုံတစ်ရာဆိုတာ ကျွန်မထင်တာကတော့ ဥာဏ်ကြီးသူတွေရဲ့ မျိုးစေ့ချမှုတစ်ခု။
အဲဒီမျိုးစေ့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်၊ လူမျိုးစုတွေကွဲပြားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်၊
ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့စာတမ်းလေးတစ်ခုမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာတစ်ခုထဲဆိုရင်
တိုးတက်နှုန်းပိုမြင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဥပမာပေးထားတယ်။
ဂျပန်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးထဲရှိတယ်၊ ဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ်
နောက်ပြီး ကနေဒါ၊ အမေရိကန်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လူမျိုးပေါင်းမျိုးစုံ၊
အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ ပျော်ဝင်အိုး(melting pot)ဆိုပြီး အကုန်ရောမွှေလိုက်လို့ထား၊
ကနေဒါကလဲ ရောင်စုံမှန်ကျောက်(mosaic) ဆိုပြီး ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းရာချီပြီး
(အခုထိတော့) ပြဿနာတွေမကင်းပေမယ့် အဆင်ပြေနေကြတာပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုတစ်ခုစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိရင် အိမ်ထောင်စုဖရိုဖရဲနဲ့
နောက်ဆုံးမိသားစုဝင်တွေပဲဘ၀မှာအရှုံးထွက်ရသလို၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာ အားလုံး ရန်ပဲဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်၊
(ကလေးဘ၀ထဲက ရန်ဖြစ်ရတာ၊ စကားလှလှလေးတွေနဲ့အချင်းချင်းဆော်လိုက်၊ ကလိလိုက်နဲ့၊
ရန်ဖြစ်နေကြရတာကိုက အရသာ၊ ပျော်စရာဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်၊ အသက်တွေကြီးလာတဲ့အထိ
အကျင့်တွေပါပြီး ပြဿနာတရပ်ကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြေရှင်းနိုင်မှုအရည်အချင်းတွေ
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေလျော့ပါးလာချိန်၊ အချင်းချင်းမတည့်ဖြစ်နေချိန်မှာ
ဥာဏ်ကြီးသူတွေရဲ့ နည်းမျိုးစုံဂုတ်သွေးစုတ်မှုကို ခံနေရတာကိုတောင်မှမသိလိုက်ပဲ လုံးပါးပါးကြရတဲ့
ဇာတ်လမ်းလေးကို လီယိုနာဒိုဒါကာပရီယိုကမင်းသားအဖြစ်ရိုက်ထားတဲ့ သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့စိန်
ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးရုံတင်ပြသနေပြီဖြစ်ကြောင်း ....
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 8:01 PM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 3:32 PM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ထိုင်ကာ “မေ” မငိုတော့ဘူးနော်…
အေးခဲကျွတ်ဆတ် လတ်ဆတ်တဲ့ညလေတွေအဝှေ့ 
ရွေ့ လျောတိုးတိုက်.. ခိုက်တုန်ဝေချမ်း
တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ရိုက်ခတ်နေကြလေရဲ့ …
“မေ”့ ထွက်သက်ငွေ့ …တရွေ့ ရွေ့နဲ့…
ခံစားနေရတာတွေ… အချစ်ဆုံးမသိပါစေနဲ့ နော်..
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 11:23 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:33 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
T13 မှကောင်လေးသို့ 
မျောက်ရွာခေါင်မိုးပေါ်က ယိုကျလာနေတဲ့ မိုးမှုန်တွေ မင်းကော်လာဖြူဖြူပေါ်မှာ
မင်းငါ့ပါးပြင်ပေါ်က သနပ်ခါး ပါးပါးလေးကို မနာလိုဖြစ်နေတယ်လို့ 
ငါ မင်းကော်လာပေါ်က မိုးမှုန်လေးတွေကို မနာလိုစိတ်မရှိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ…
အတန်းထဲ လူရှင်းချိန်တွေ.. စက္ကူ မြားဖြူဖြူလေးတွေကိုဖွင့်လို့
သူတောက်ထုတ်လိုက်တဲ့၊ အချဉ်ထုပ်က မရမ်းစေ့လေး..
အဆောင်ကင်တင်းလမ်းလေးဘေးက ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ မင်းပုခုံးပေါ်
မတော်တဆ ကျခဲ့တာ… မင်းအတွက်ကတော့ မလှပခဲ့ဖူးဖြစ်မှာပေါ့…
ဦးချစ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နောက်က ယိုင်နဲ့နဲ့ ခုံမှာ
ငါ့ချစ်သူ ပုခုံးပေါ် ငါမှီလိုက်မိစဉ်က၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက
အဲဒီနေ့က မင်းဆောင့်ချလိုက်တဲ့၊ လက်ဘက်ရည်ခွက်
ငါမှ မင်းကိုမချစ်တာ၊ အချစ်နဲ့စစ်မှာ အမှန်တရားတဲ့..
အနားမှာ တရစ်ဝဲ၀ဲ၊ မင်းပဲ ပင်ပန်းမှာပေါ့ကွယ်…
နေ၀င်မိုးချုပ်မအား တကုပ်ကုပ်နဲ့၊ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲ လဲသတဲ့လေ….
ဘွဲ့ နှင်းသဘင်ဘေးက၊ ချစ်သူလမ်းကြားမှာ
ငါ့ရင်ထဲမှာ၊ မင်းတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ ပူလောင်မှုတွေကို
သနားနေရုံကလွဲလို့ ဘာမှ မခံစားရတာ…
ခံစားချက်ဆိုတာ လုပ်ယူလို့ မှမရတာ..
ခံစားချက်မရှိ... တစ်လောကလုံးအသိမို့ ...
(တစ်ခါတုန်းက မျောက်ရွာက ကောင်လေးတစ်ဦးသို့ )
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 2:02 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
လှပတဲ့ ခုနှစ်လွှာသက်တန့် လေးကိုမြင်ချင်ရင် မိုးရွာတာကို အရင်သည်းငြီးခံကြရမယ်..
ခုနှစ်လွှာသက်တန့်ရဲ့ တဖက်မှာ ရွှေအိုးလေးရှိနေလိမ့်မယ်လို့ လဲ..
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:40 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကာဗူလီဝါလား၊ သူတောင်းစားအမယ်ကြီး၊ အယ်ဒီတာ၊ စသဖြင့်
ကျွန်မကြိုက်တဲ့ တဂိုးရဲ့စာတွေ ထဲက တက္ကသိုလ်ဝင်းမွန် ပြန်ဆိုထားတဲ့
ပီတိ ဆိုတဲ့စာလေးကို မေလအထိမစောင့်တော့ပဲ စာချစ်သူများနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အပူရှိန်ကြောင့်မြေပြင်သည် ခြောက်လျှက်၊ သွေ့လျှက်၊ ပက်ကြားအက်လျှက်..
“အချစ်ရေ…. လာပါ၊ လာပါ”
ထို့ကြောင့်စာအုပ်ကို ပိတ်ပြီးလျှင်၊ ပြူတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လျှက်
မြစ်ထဲသို့ဒူးဆစ်မြုပ်အထိ ဆင်းနေသော လူငယ်တယောက်သည်
မြစ်ကမ်းစပ်တွင် ပေကပ်ကပ်ရပ်နေသော ရွှံ့ များလူးနေသော ကျွဲကြီးတကောင်ကို
ရေချိုးပေးရန်အတွက် ခေါ်ငင်နေသည့်အဖြစ်ကို တွေ့ လိုက်၏။
ရင်တွင်း၌်ကား ပီတိများ ဖြာဝေလျှက်…
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:22 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မတွေ့ ရတဲ့နှစ်တွေ၊ နှစ်မျောတသ
တမ်းတတဲ့ခရေလဲ၊ မြေမှာကြွေလို့ 
ဘယ်လိုအငြိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိပ်စက်
မရက်စက်ပါနဲ့မောင်...
မောင်ကလွဲလို့ www တခုလုံးသာသိ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 11:07 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ long-weekend တခုတုန်းက ကျွန်မတို့ မောင်နှစ်မတစု ဘီစီပြည်နယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းက
သစ်သီးပန်းမာန်တွေ၊ တောင်ကုန်းတွေပေါတဲ့ Okanagan ဆိုတဲ့နေရာကို ရက်တိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်..
ခရီးထွက်ဖို့ကျွန်မ စပြောတော့ အားလုံးကအရှိန်တက်သွားကြတယ်... နောက်တော့
ရာသီကလဲအေးလာ..ကျောင်းတွေ၊ အလုပ်တွေပြန်ဝင်ရမယ့် စက်တင်ဘာလဆန်းကလဲဖြစ်၊
နွေရာသီမှာသုံးခဲ့ဖြုန်းခဲ့ကြတာလေးတွေကလဲရှိဆိုတော့ ငွေရေးကြေးရေးကိုစဉ်းစားကြရင်းနဲ့ သွားမလိုလို မသွားမလိုလိုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အနားကပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီး ကောက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်..
မထွက်ခင်တရက်မှာမှကပ်ပြီး နေမယ့် ဒေသ Okanagan Falls ဆိုတဲ့မြို့က resort တခုမှာ
ဘွတ်ကင်တင်လိုက်တယ်.resort နာမည်ကလဲ lake view resort ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီး
ယူထားလိုက်တယ်.. ဈေးကလဲသက်သာ၊ ရေကန်နဲ့လဲနီး၊ မြို့နာမယ်ကလဲ Okanagan Falls ဆိုတော့
ကျွန်မတို့အားလုံးမျက်စိထဲမှာ ရေတံခွန်တွေ၊ တောင်ကျချောင်းတွေ၊ ကနေဒါရဲ့ ဧရာမကျောက်စိမ်းရောင်၊
Okanagan Falls ကို ဟိုင်းဝေး ၃ သို့မဟုတ် ၅ က သွားလို့ရတယ်။
တယောက်က ဟိုင်းဝေး၅ကိုမကြိုက်ဖူးတဲ့ ၃ကပဲသွားမယ်ဆိုလို့ ၃ အတိုင်းထွက်လာကြတယ်..
ကားနှစ်စီးနဲ့လူကိုးယောက်၊ တညအိပ်လေးပဲ၊ နောက်ပြီး ၄နာရီပဲမောင်းရတယ်ဆိုလို့
ဒီလိုနဲ့ ဟိုင်းဝေး ၃အတိုင်းမောင်းလာလိုက်တာ ရှုခင်းတွေကတော့အံ့မခန်းအောင်လှပတယ်..
တောင်တန်းတွေ၊ တောင်ကျချောင်းတွေ၊ ကျောက်တုံးထူတဲ့စမ်းလေးတွေနဲ့၊
ဒါကြောင့် တချိန်လုံးကားမူးလို့အန်နေတဲ့လူနဲ့၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါလို့ ဟိုနားလေးလှလို့ ရပ်ပါဦး၊
ဒီနားလေးလှလို့ရပ်ပါဦးဆိုတဲလူနဲ့၊ မြို့တမြို့ရောက်တိုင်းဆင်းဦးမယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ လေးနာရီခရီးက
ဒီလိုနဲ့နေ့လည်နှစ်နာရီထိုးတော့ Okanagan Falls ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်လာတယ်။
မြို့ကတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်ပြီး မြို့အ၀င်ကနေ မိုတယ်ရောက်တဲ့အထိ ဘာရေတံခွန်မှကှိုမတွေ့ဘူး..
ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ Okanagan ဆိုတာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အားလုံးလဲဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတာပေါ.
ဘွတ်ကင်တင်ထားတဲ့နေရာရောက်တော့ မိုတယ်ရှေ့မှာ ရေကန်တော့တွေ့ပါပြီ
ဒါပေမယ့်သေးသေးလေး၊ ကန်စပ်မှာကလဲ မသန့်မရှင်းနဲ့၊ တည်းခိုရမယ့် resort ဆိုတာကလဲ
သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်တွေအောက်မှာ မှုန်ကုပ်ပြီး အိုဟောင်းနေတယ်။ ဒါနဲ့Pentiction
မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်ကြမလားလို့ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြပေမယ့် ခရီးပန်းလို့အရမ်းမောနေတဲ့သူတွေနဲ့
အန်တဲ့သူက ဆက်မသွားနိုင်လို့ အဲဒီမှာပဲနေလိုက်ကြတယ်။ ဈေးကလဲတကယ်တော့ မသက်သာပါဘူး။
တခန်းကို ၁၅၀၊ နှစ်ခန်းဆိုတော့ ၃၀၀ ပေးလိုက်ရတယ်။
ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မတို့ခရီးတွေမကြာခဏထွက်ကြတာ တခါမှဒီလိုမဖြစ်ဖူးပါ။
ကျွန်မတို့လဲ ပစ္စည်းတွေချပြီး နားတဲ့သူနား၊ ရေကန်နားသွားတဲ့သူသွား၊ မြို့ပတ်ကြည့်သူကြည့်နဲ့
ရေတံခွန်တွေ့ပြီလားလို့ မိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက walky-talky နဲ့လှမ်းလှမ်းမေးရတာအမော..
“ဘာရေတံခွန်မှမတွေ့ဘူးဟေ့” လို့ပြောရင်း သွားတဲ့သူတွေအသံသာ walky-talky range
ဝေးသွားလို့ပျောက်သာသွားပါတော့တယ်။ ညနေစောင်းတော့ ရေတံခွန်ရှာတဲ့သူတွေစိတ်ပျက်ပျက်နဲ့
စားစရာကလဲမရှိ၊ ဗိုက်ကလဲဆာဆာနဲ့ နီးရာဆိုင်က အသားနဲ့အသီးအရွက်တွေဝယ်ပြီး ညစာကို
မီးကင်နဲ့ပဲပြီးလိုက်ကြတယ်။ မိုတယ်ရှေ့ပန်းခြံ၊ ထီးဝိုင်းဝိုင်းလေးအောက်က
Barbequeစားတဲ့ခုံလေးတွေမှာစုထိုင်စားကြတယ်။ ပန်းခြံလေးနဲ့ ရှေ့ကရှုခင်းလေးနဲ့သိပ်တော့မဆိုးပါဘူး။
လူကြားမကောင်းမှာစိုးလိုို့ ဆိုပြီး မိုတယ်နောက် ကရေကူးကန်မှာပဲတချို့ကရေဆင်းကူးလိုက်ကြတယ်။
အဲဒီညက ကောင်းကင်ပေါ်က“လ”က ထူးဆန်းလွန်းစွာသွေးနီရောင်ဖြစ်နေတယ်၊
ညရောက်လာတော့ ကျွန်မကြောက်လာတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းသွေးနီရောင်ဖြစ်နေတဲ့“လ”ရယ်၊
မရယ်မပြုံးမိုတယ်ပိုင်ရှင် ဧည့်ကြိုအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ ဆံပင်နီနီကိုမြင်ယောင်လာပြီး
တခါးတွေချက်ကျရဲ့လားလို့ ထစစ်တာကို အရှေ့က hide-a-bed ပေါ်မှာအိပ်နေတဲ့ ကျွန်မမောင်တွေက လှောင်တယ်။
“အေး...ရုပ်ရှင်တွေထဲက စိတ္တဇ ဖြစ်နေတဲ့ မိုတယ်ပိုင်ရှင်တယောက် ဒီလိုပဲ လာတည်းတဲ့သူတွေကို လိုက်သတ်တာကြည့်ရတယ်မို့လား” လို့ကျွန်မပြောပြီး ၀င်အိပ်လိုက်တယ်။
အိပ်မပျော်ခင်မှာ အိပ်ရှေ့က ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်ကြားတော့ ကျွန်မထကြည့်တယ်။ ကျွန်မကိုလှောင်တဲ့
ကျွန်မကိုတွေ့တော့ “ဟီး..ဟီး”ဆိုပြီး မလုံမလဲနဲ့ ရယ်နေကြလေရဲ့...
နောက်တနေ့မနက်ခင်းကျတော့ အားလုံးမကျေမနပ်နဲ့ ဒါ နာမည်ကြီးတဲ့ Okanagan မဖြစ်နိုင်ဘူး၊
မကျေနပ်ဖူး ဆိုပြီး မြောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးအတိုင်း Kelowna မြို့ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။
Kelowna မရောက်ခင် Pentictionမြို့ကိုဖြတ်ရပါတယ်။ Pentictionမြို့အ၀င်မှာ တွေ့ရပါပြီ...
လှလိုက်တဲ့ ရေကန်တွေဆိုတာ၊ ပင်လယ်ဝကြီးတွေလိုပဲ..
ကျောက်တောင်နဲ့ကပ်နေတဲ့ ကားလမ်းရဲ့ ညာဘက်က တောင်စောင်းစိုက်ခင်းတွေပေါ်မှာ လူတရပ်ပဲရှိတဲ့ ပန်းသီးပင်တွေ။ plum ပင်တွေမှာ အသီးတွေဆိုတာ ပြွတ်သိပ်သီးနေကြတယ်။
ရေကန်စပ်နားကစိုက်ခင်းတွေရဲ့အောက်မှာလဲ သောင်လှလှတွေနဲ့ မြစိမ်းရောင် Okanagan ရေကန်ကြီး၊
Kelowna မြို့ရောက်တော့ မကျေနပ်ကြတဲ့သူတွေက တညဆက်အိပ်မယ်ဆိုပြီး မိုတယ်၊
ဟိုတယ်ရှာကြပြန်တယ်။ နွေအကုန်နောက်ဆုံး long-weekend မို့ Kelownaမြို့ပေါ်က
တော်ရုံတည်းခိုခန်းတွေက ပြည့်နေတာပဲ။ မိုတယ်တခုတော့တွေ့တယ်။ လူကိုးယောက်ဆိုတော့
သုံးခန်းယူရမယ်တဲ့ တိုတိုပြောရရင် သုံးခန်းလုံးကို၄၈၀ ဆိုလားနဲ့ပေးမယ်တဲ့။ ဈေးတော့အတိအကျကျွန်မ
မမှတ်မိတော့ဘူး။ နေရာကမှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့ မနက်စာတောင်ကျွေးပုံမရဘူး။
ဒါမျိုးကကြိုတင်ဘွတ်ကင်တင်ရတာ၊ အနားကပ်မှဆိုရင် ဈေးကြီးလုပ်ရတာကိုး။ ကျွန်မတို့မယူပဲ
လှပတဲ့ကမ်းစပ်တွေပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ မြို့ကိုတပတ်မောင်းရင်း သင့်တော်တာရှာကြတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ Manteo Resort ဆိုတဲ့ခမ်းခမ်းနားနားဟိုတယ်ကြီးတခုဆီရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဟိုတယ်ထိပ်ရောက်တော့ “ရိတ်မယ်နော်ကြည့်လိုက်ဦး၊ နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး တချို့က
မ၀င်ချင်ကြဘူး။ “ဆက်မရှာနိုင်ဘူး၊ တော်ပြီ၊ နီးရာသာဝင်ကွာ” ဆိုပြီး ဆက်မရှာနိုင်ကြတော့တဲ့
အမတွေညီမတွေကြောင့် အနဲဆုံးဈေးတော့ဝင်မေးကြမယ်ဆိုပြီး သုံးရောက်က၀င်သွားကြတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေကားထဲမှာစောင့်နေကြတာပေါ့။ တိုတိုပြောရရင် သဘောကောင်းတဲ့ ဧည့်ကြို
မမချောလေးတွေက မောပန်းပြီးနွမ်းနယ်နေတဲ့ကျွန်မ တို့ကိုကြည့်ပြီး တညကို အခွန်မပါပဲနဲ့တောင် ၆၀၀
လောက်တန်တဲ့ lake-side villa အခန်းကို ပရိုမိုရှင်းနှုန်းနဲ့ ၃၈၀ နဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
villa ကတကယ်တော့ ခမ်းနားတဲ့ town-house ဒီဇိုင်းပါပဲ။ ကားဂိုဒေါင်နှစ်ခုနဲ့ အထဲမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း
ပျံနေတာပေါ့လေ။ အကောင်းစား entertainment system တွေ၊ အ၀တ်လျှော်စက်ကအစ၊
မီးဖိုထဲမှာလဲ ဆား၊ သကြားကအဆုံး အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပ်ါပဲ။
ကူးလို့ရတဲ့ကန်ထဲကျွန်မတို့ရေကူးဖို့ပြင်ကြတယ်။ ကန်ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ရေဘဲလေးတွေ၊
ငှက်ကလေးတွေနဲ့၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက တောင်ပြာတွေနဲ့ သိပ်လှတဲ့မြို့လေးပါ၊
ဒီမြို့က သစ်သီးတွေသိပ်ထွက်တော့ ၀ိုင်အလျှံပယ်ထွက်တဲ့မြို့ပေါ့၊
ထုံးစံအတိုင်းBarbeque ၀ါသနာပါသူ ယောင်္ကျားလေးတွေက ညစာချက်မယ်ဆိုပြီး
ဈေးထွက်ဝယ်ကြတယ်။ ဒီလောက်အပျော်ခရီးမှာ ဟင်းမချက်ရရင်မနေနိုင်သူတွေကလဲပါသေးတယ်။
အရေးထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံပါမလာလို့ဆိုပြီး ကျွန်မညီမတယောက်ကို မြို့တပတ်ရေကူးဝတ်စုံလိုက်ရှာ
၀ယ်ပေးရသေးတယ်။ ပထမ ညီအစ်မတစု တိုးရစ်တွေသွားတဲ့နားတ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတော
့ထုံးစံအတိုင်း ရေကူးဝတ်စုံလေးတခုကို ရာနဲ့ချီဈေးတောင်းတယ်။
“မတတ်နိုင်ဘူး၊ Wal-Mart ဒီမြို့မှာရှိကိုရှိရမယ်”ဆိုပြီး Wal-Mart ကိုရှာကြတယ်။ ကားထဲမှာ
အဖိနှိပ်ခံဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်အချို့နဲ့ အနောက်နိင်ငံက မချမ်းသာသူတွေကို မိနီပြူလိတ်လုပ်တဲ့
Wal-Mart မှာဈေးဝယ်သင့်မသင့် utilitarianism နဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်းနေကြတဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်။
အမတယောက်ကအော်မှပဲ ၂၅ဒေါ်လာတန်လောက်နဲ့ အဆင်ပြေလာကြတယ်။
ဗစ်လာကိုပြန်ရောက်တော့ အချို့သောမောင်တွေက ကမ်းစပ်ကို ကားမောင်းပြီး ထွက်သွားကြတယ်။
ချက်တဲ့သူကချက်ပေါ့၊ ကျွန်မနဲ့အမ၊ ညီမတွေကတော့ ဟိုတယ်အပြင်က heated pool
မှာညမှာဆင်းကြတယ်။ ရေကူးအပြီး အဲဒီညကအနီးအနားတ၀ိုက်မှာလမ်းထွက်လျှောက်ကြတယ်။
လကထုံးစံအတိုင်းနီနေပြန်တယ်။ အသက်ရှုရလဲနဲနဲကျပ်သလိုလိုပဲ။ နေ့လည်ကလဲ “လ”တင်မက
ကောင်းကင် “နေ” ကပါနီနီကြီးဖြစ်နေတယ်။
နောက်နေ့မှာ ကျွန်မတို့ ဟိုင်းဝေး၅ကိုသုံးပြီးပြန်လာကြတယ်။ အပြန်ခရီးကလဲဖြစ်၊
ဟိုင်းဝေးကလဲကောင်းတော့ ၄နာရီလောက်နဲ့ Vancouver ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။
လကြီးနီနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အိမ်ရောက်မှသိရတယ်။ U.S. Washington State
မှာတောမီးအကြီးအကျယ်လောင်နေတာ လေပင့်ပြီး Canada ဘက်ကိုမီးခိုးရိုက်တာဖြစ်ကြောင်း။
ကနေဒါဘက်ကိုပါမီးကူးပြီး အလာတုန်းက ဖြတ်လာတဲ့ Manning Park
မြို့ပြနဲ့ဝေးရာ တောထဲမှာဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်မနေချင်ဘူးဆိုရင် ဟိုတယ်ချိန်းကြီးကြီးတွေရှိတဲ့မြို့ကိုသွားဖို့ပါ။
ကြိုတင် မစီစဉ်ပဲကောက်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဒီခရီးလေးက ပျော်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ရှင်။
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:16 AM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
The man who shuns and fears everything and stands up to nothing becomesacoward, the man who is afraid of nothing at all, but marches up to every danger, becomes foolhardy.
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 11:31 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မင်းအသံမှာ၊ မချစ်ဖူးလို့ အရှုအမှုးနဲ့
အားနာတတ်သူငါ တယောက် စမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်...
အပျော်သဘောနဲ့ ဖျာရွဲ့ ခင်းလာသူတချို့ကြောင့်
မင်းနဲ့ငါ့ရဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို အမှတ်ရနေခဲ့ပါမယ်...
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 11:12 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ